Malware Uye Nzira Dzokudzivisa I - Semalt Ichakuratidza Iwe Vashoma Tricks
Julia Vashneva, iyo Semalt Mutevedzeri Mukuru weVatengi vanobudirira, achasvinudza maziso ako kune mamwe maitiro anodiwa kuti aite apo ari kurwiswa nemarware.
Anenge tose zvedu tave tichishanda nemakombiyuta nemakombiyuta mune imwe nzvimbo yehupenyu hwedu. Ndizvo here? Hazvina kufadza kuva nemavhuvira; Pane kudaro, iwe unofanirwa kuva nehanya nehutano hwako hwekutsvaga nekuchengeteka uri pangozi. Apo kombiyuta yako inotanga kuderera, ndiyo nguva yaunofanira kuvhara malware uye kutora matanho akaoma.
Shandisa kuchengetedzwa kwemavara pamativi ose
Chinhu chokutanga chaunofanira kuita ndechekudzivirira zvakasara pane imwe neimwe - computer consulting jobs. Izvi zvichaita kuti urongwa hwako huve hwakachengeteka kubva kune-web-based kurwisa, kushaya hutachiona hwepakombiyuta, kutapira mavairasi uye kutyaira-nekutora. Nokuda kwekudzivirirwa kukuru, iwe unofanirwa kushandura yako network yekutengesa kusachengetedza software uye kuongorora iyo kamwe chete kana kaviri pavhiki. Iwe unogona zvakare kuedza Intrusion Prevention Systems, Firewall, Insight, SONAR, uye Antivirus yekuchengetedza kwako paIndaneti. Symantec Security Response inoti tinofanira kuchengeta mapurogiramu edu uye maitiro ekugadzira up-to-date.
Deredza kudengenyeka kwepamusoro
Kuderedza kusangana kwepamusoro kusvika pamwero mukuru kunokosha. Iwe unofanirwa kubvisa zviyero zvausina kushandisa. Rega ndiuye pano kuti ndikuudze kuti mhedzisiro yakawanda kana yakaoma inogona kukonzera kukuvadza kwakanyanya kune yako. Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kuongorora kadhi yako kamwe chete pazuva uye urege kurega kuisa software isingazivikanwi uye isingadiwi.
Kuvandudza masimba eSmantec Endpoint Protection asina
Kuvandudza zvirongwa zvako zvekudzivirirwa kwemaSymantec kunokosha..Kunyangwe zvigadziriswa zvishoma zvinogona kuunza kuchinja mukuchengetedzwa kwako kwekuInternet. Iwe unofanirwa kuchengeta zvigadziriswa pane zvose zvaunoda uye uchengetedze hutano hwako kuitira kuti vaseki varege kukunyengera.
Chengetedza mushanduri wemapulagi akavandudzwa
Vakawanda vevanorwisa vanoongorora mavheekeri enyu vozoedza kuuraya maitiro ako. Ndicho chikonzero nei zvakakosha kuchengetedza shanduro yako yekugadzirisa uye mapurani aripo. Iwe haufaniri kumboshandisa Internet Explorer, Acrobat, Flash, uye Abode Photoshop pasina kuongorora kombiyuta yako kana kuti foni. Mishonga yakawanda uye malware inopinda yako system kuburikidza neInternet Explorer. Saka, zviri nani kuti ugare kure neshanduro iyi uye edza Google Chrome kana imwe shanduro yaunosarudza.
Dzora kushandiswa kweP2P
Imwe yenzira dziri nyore uye dzinokurumidza hackers dzinoshandiswa kugovera malware ndeyekunyorera peer-to-peer (P2P). Unofanira kugara uchivhara kushandiswa kweP2P. Nokuda kweizvi, unogona kuumba nekusimbisa mitemo isina P2P yakadai sekushandiswa kwekombiyuta yako inofanira kuvharirwa kuitira kuti hapana kunze kunze kwekugona kuwana chida chako. Nenzira iyi, unogona kuve nechokwadi kuti kombiyuta yako yakachengetedzwa kubva kune malware uye mavhairasi kusvika pamwero mukuru.
Unogona kumisa kuuya kwemavirusi uye malware nekutsvaga AutoRun. Paunenge uchitsvaga chimwe chinhu, unofanirwa kuchidzivisa nguva dzose kuitira kuti zvinhu zvisingakoshi zvisawanikwe pakombiyuta yako.
Iva nechokwadi chekuti zvinyorwa zveS OS zvinoshandiswa
Pakupedzisira asi kwete zvishoma iwe unofanirwa kuve nechokwadi chokuti chimwe nechimwe cheS OS chinoshandiswa zvakanaka. Makambani akafanana neApple, Microsoft neGoogle release pack packs, zvidziviriro zvekuchengetedza uye hotfixes kumakambani avo pasi pose mwedzi. Zvishandiso zvavo zvinotibatsira kugadzirisa kukanganisa kwemaitiro edu ekushanda. Iwe unogona kuwana chero chezvinhu izvi uye unoshandisa pamakombiyuta yako kuitira zvakakwana kuchengetedzwa uye kuchengetedzwa kwepaIndaneti. Pasinei nokuti uri kushandisa Mac OS X, Windows kana imwe sangano rekushanda, unofanira kugara uchigadzirisa ma browsers nemapurogiramu kamwe chete kana kaviri pamwedzi.